Ny iray Popular Snow sotron'afo fehin-kevitra avy any Richina - China Richina
Ny iray Popular Snow sotron'afo fehin-kevitra avy any Richina
Heavy-Duty Rolling 26-mirefy Snow Pusher tamin'ny 6-mirefy kodia sy Adjustable tahony
Ny Rolling Pusher Snow dia hoatr'izany mba hanao ny oram-panala fanesorana haingana kokoa ary mora kokoa amin'ny indray sy ny sorony. Amin'ny famolavolana izany no don`t mila miahiahy momba ny aretina avy amin'ny hiondrika, manipy sy manosika satria ny Rolling mihetsika sy ny famolavolana ny angady manala ny fanaintainana izay azo avy amin'ny lapelina. Rehetra mila aloha dia tsotra manosika sy pivoting hetsika.
Miaraka amin'ny famolavolana sy ny vy concave scraper sisin'ny, afaka hanadio ny oram-panala ao anatin'ny iray mora foana izany. Sahiratsy mandrefy 26 santimetatra ny sakany tamin'ny 13 santimetatra ny haavony mba afaka hikarakara haingana lalana malalaka ho an'ny mandeha, na hanala ny lalana mivily haingana kokoa noho ny amin'ny sahiratsy nentim-paharazana, mba afaka mankafy bebe kokoa ny asa ririnina na handany fotoana bebe kokoa mankafy hafanana an-trano.
Ny tahony Adjustable azo napetraka ho avo ankapobeny manomboka amin'ny 47 ny 51 santimetatra mamela anao hifidy ny toerana tsara indrindra handraisana ny tenanao. Plus, ny tahony dia padded ny hafanana sy ny tanana fanampiny fampiononana. Ankoatra izany, ny mora sy ny pivoting Rolling mihetsika no natolotry ny ny 6-mirefy adidy mavesatra-polypropylene kodiarana. Ny ridged kodiarana manome fahafahana azy ireo mafy ny tany, ary ho mora foana raha ianao hifandimby sahiratsy ny oram-panala izy.
Lafin-javatra ao amin'ny Rolling Snow Pusher lapelina:
Lafiny ankapobeny: 16.5 "W tahony; 47 "- 51" H Adjustable tanteraka avo; vary: 26 "W X 13" H; kodiarana: 6 "savaivony X 2.5" matevina; 9 lbs
Lapelina dia manasongadina ny aluminium tahony amin'ny padding, polypropylene kodia sy angady miaraka amin'ny vy fikikisana lelan-tsabatra.
Pivoting maharitra kodiarana amin'ny tandavan vahana fanampiny hisosa effortlessly manodidina sisiny, sisin-dalana sy ny driveways.
Ny tahony telescoping Adjustable mamela anao hahazo ny halavan'ny tonga lafatra ho an'ny asa.
Ny zoro manosika stratejika mahatonga azy io mba hahafahanao mijoroa tsy misy fanaintainana, na miezaka indray.
CASL Brands lamosiny ny vokatra tamin'ny 1-taona mpanamboatra ny fiantohana ho an'ny fividianana tebiteby-maimaim-poana.